Izindaba - Izinzuzo zokufakwa uphawu kwe-ultrasonic
I-Ultrasonic uhlobo olulodwa lwegagasi lomshini, elenziwe ngohlelo lokuphakelwa kwamandla nohlelo lokudlidliza lwe-ultrasonic. Kungamandla wokuphindisela abuyisanayo wemvamisa ephezulu, amandla aphezulu, akhishwa ngamandla okushayela. Futhi imingcele ehambisanayo kanye nengxenye eyinhloko iphuzu eliyinhloko lobuchwepheshe be-ultrasonic.
Idijithali ye-ultrasonic yokuthola imvamisa ezenzakalelayo → I-Transducer (Khiqiza igagasi le-ultrasound) → Uphondo lwe-Ultrasonic (Khulisa i-ultrasonic) → Isikhunta seHold (Transmit ultrasound)
Futhi ubuhle nobubi bokwenza isikhunta yingxenye ebalulekile ye-ultrasonic, sethula i-analyzer esezingeni eliphakeme yokuvinjelwa, i-mold spectrum analyzer, ngokuhlola ngokunembile imvamisa yesikhunta nokuhlaziywa kwegagasi lesikhunta ngalezi zinsiza.thus zingasiza umshini ngokukhipha okuzinzile nokuphumelelayo amandla e-ultrasonic.and anciphise ukulimala okungapheli ngenxa yemvamisa engahambelani nomshini, yini enye, yandisa impilo yomshini nesikhunta.
Kumaphethini wokufaka uphawu kwephubhu yePlastiki, anohlobo lokufaka uphawu oluhlukile, kuphakanyiswa ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende.
Ngokufakwa uphawu kwe-Ultrasonic indawo yangaphakathi yophawu lwethubhu ishiswa ngumfutho omkhulu wemvamisa okhiqizwa ngophondo lwe-ultrasonic. Ishubhu libe seliboshelwa emgodini bese lipholisa ukwakha uphawu lweshubhu.
Ultrasonic seal ngeke ilimaze impahla ngaphakathi futhi ukufaka uphawu kucocekile futhi kuzinzile. Uma udinga ikhwalithi ephezulu nomphumela wokuqina wokuqina, uhlobo lokufaka uphawu lwe-ultrasonic luphakanyiswa kakhulu.
Uma unebubanzi obuhlukahlukene bethubhu, umshini wokufaka uphawu we-ultrasonic udinga kuphela ukuguqula abanikazi bethubhu futhi asikho isidingo sokushintsha izingxenye zokufudumeza, izindleko nesikhathi esidingekayo kuncane kakhulu.
Okwamanje, njengoba ukubekwa uphawu kwe-ultrasonic kuyisikhangiso esibandayo, awudingi i-chiller yezimboni ukuze usebenze nayo. Yonga kokubili isikhala sendawo nogesi.
Ngakho-ke wamukelekile ukuxhumana nomshini we-HX manje, umphakeli wakho womshini owodwa wokupakisha futhi masikusize!